डाक्टरले श्रीमती र दुई छोराछोरीलाई मारेर आफुले पनि बिस सेवान गरे:आखिर किन गरे त आफु सङ्ग सङ्गै स परिवार को हत्या ? - हातेमालो डेली
डाक्टरले श्रीमती र दुई छोराछोरीलाई मारेर आफुले पनि बिस सेवान गरे:आखिर किन गरे त आफु सङ्ग सङ्गै स परिवार को हत्या ?
कोभिडको ड र ले डाक्टरले आफ्नो परिवार नै सकेको समाचार सार्वनिक भएको थियो ।भारत कानपुरमा श्रीमती र दुई छोराछोरीलाई मृत्यु दिने डाक्टर सुशील कुमारले पहिले निद्राको चक्की खाए र त्यसपछि गंगामा हाम फालेको रहस्य खुलेको छ ।सायद उसले सजिलै म र्न सकोस् भनेर यस्तो गरेको हुनसक्छ । निद्राको च क्की बरामद भएकाले प्रहरीले यस्तो आशंका गरेको छ ।
प्रहरीले श्रीमती र छोराछोरीको शव नजिकै चियाको खाली कप फेला पारेको थियो ।साथै, भान्सामा केही पाउडर फेला परेको थियो। फरेन्सिक अनुसन्धानले चियामा पाउडर मिसाएर तीनै जनालाई दिएको पुष्टि भएको छ । ताकि ऊनीहरु बे हो श हुन्। सुशीलको ज्याकेटबाट औषधी फेला परेको देखेर सुशीलले ती औषधी श्रीमती र छोराछोरीलाई पि सेर दिएको हुन सक्ने प्रहरीको आशंका छ ।
गंगामा दश दिनसम्म खोजी अभियानमा उनको मोबाइलको अन्तिम लोकेशन सरसैया नदि किनार देखाएको थियो । त्यसयता प्रहरीले लगातार गंगामा खोजी अभियान चलाएको थियो । डीसीपी पश्चिम बीबीजीटीएस मूर्तिको नेतृत्वमा पानी प्रहरी र गोताखोरहरूको टोलीले दिउँसो करिब १२ बजे गंगाको बीचमा शव फेला पारे ।
उसको ज्याकेट र प्यान्टको खल्तीमा खोजी गर्दा सबै कागजात फेला परेको थियो । जसका कारण सुशीलको शव पुष्टि भएको हो ।
Previous articleकांग्रेसको महाधिवेशनमा पुगेका पत्रकारहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
Next articleअघोरी चुन चुन बाबा संग जोडीएका अनौठो रहस्य !